काठमाडौं । कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै तीव्र फैलिँदै जाँदा रोकथाममा अत्यावश्यक मानिने खोप, रेम्डेसिभिर र अक्सिजन चरम अभाव खड्किएको छ । दैनिक संक्रमणदर २ हजारमाथि पुगे पनि आमनागरिकले खोप पर्याप्त नहुँदा खोप लगाउन पाएका छैनन् । अस्पताल भर्ना भएका र गम्भीर बिरामी कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेम्डेसिभिर बजारमा सहज रूपमा पाइन छोडेको छ । – […] The post रेम्डेसिभिर, खोप र अक्सिजन अभाव appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
अस्पतालमा अक्सिजन अभाव : चिकित्सक भन्न थाले अब भगवान भरोसा !
नेपालमा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको संक्रमणले दिनानुदिन उग्ररुप लिँदै छ। महामारी तीव्र भएसँगै अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव पनि उत्तिकै देखिएको छ। कोरोना संक्रमण महामारीको बेला अन्य अस्पतालहरुजस्तै काठमाडौंको वीर अस्पतालमा पनि अक्सिजनको चरम अभाव भएको...
अक्सिजन अभाव भएकाले बिरामी डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो : केएमसी अस्पताल
काठमाडाैं : काठमाडाैं मेडिकल कलेज सिनामंगलले अक्सिजन अभाव भएकाले बिरामी डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। आज एक विज्ञप्तिमार्फत अस्पतालले नेपाल सरकारले दिने भनेको २ सय ५० थान अक्सिजन सिलिण्डर एउटा पनि नआएको भन्दै माैज्दात सिलिण्डर रित्तिएको जनाएको छ।अन्यत्रबाट पनि अक्सिजन नआएकाले आज (बुधबार) २९ गते साँझसम्मलाई मात्र अक्सिजन पुग्ने अस्पतालले जनाएको छ। साथै बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुन नदिन डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ। सर
ओम अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, उपचारमा कठिनाई
काठमाडौं। काठमाडौंको चावहिलस्थित ओम अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरले अक्सिजन अपर्याप्त भएको जनाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना लिन असमर्थ जनाएको छ। अस्पतालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सक र नर्स लगायतका मानव संशाधन पर्याप्त हुँदाहुँदै अक्सिजनको अभाव हुँदा नयाँ कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिएको जनाएको हो। अक्सिजन आपूर्ति सहज हुनासाथ उपचार सेवा पूर्ववत सञ्चालन गर्ने अस्पतालले जनाएको छ।
काठमाडौं, बैशाख २४ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको दोस्रो लहरले बिरामीको संख्या बढ्दा उपचारमा आवश्यक अक्सिजनको आपूर्ति सिलिन्डर अभावका कारण प्रभावित भएको छ। ग्यास उद्योगीसँग पर्याप्त सिलिन्डर नहुँदा आवश्यकताअनुसार अक्सिजन आपूर्ति हुन सकेको छैन। उद्योगसँग अक्सिजन रिफिलिङ गर्ने क्षमता भए पनि सिलिन्डर नहुँदा अक्सिजन अभाव भएको नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघले जनाएको छ। सिलिन्डर नभएकाले उद्योग […]
दाङ र बुटवलमा अक्सिजन अभाव भएपछि बिरामी पोखरासम्म
राजधानी काठमाडौं सहित बुटवल, दाङ, नेपालगञ्जका अस्पतालमा त अक्सिजनको हाहाँकार नै हुन थालेको छ । बुटवलका अस्पतालले त अक्सिजन नभएको भन्दै बिरामी भर्ना लिनै छाडेका छन् । अन्यत्रका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अहिले पोखरामा उपचारकै लागि भनेर टाढा टाढाबाट...
१६ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन ग्यासको खपत ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा अक्सिजन अभावको समाचार आइरहँदा नेपालमा पनि सिलिण्डर ‘होल्ड’ गर्न थालिएको छ । कोशी अस्पताल विराटनगरका सुपरिटेन्डेन्ट चुमनलाल दासका अनुसार केही दिन यता विराटनगरमा धेरैले सिलिण्डर होल्ड गरेका छन् । अक्सिजन अभाव हुनसक्ने त्रासले सिलिण्डर होल्ड भएको हो । तर […]
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिसकेको छ। राजधानी बाहिरका कतिपय अस्पतालले दोस्रो लहरको सुरूआती अवस्थामै पनि अक्सिजन अभाव खेपिरहेका छन्।
काठमान्डाैं / कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै तीव्र फैलिँदै जाँदा रोकथाममा अत्यावश्यक मानिने खोप, रेम्डेसिभिर र अक्सिजन चरम अभाव खड्किएको छ । दैनिक संक्रमणदर २ हजारमाथि पुगे पनि आमनागरिकले खोप पर्याप्त नहुँदा खोप लगाउन पाएका छैनन् । अस्पताल भर्ना भएका र गम्भीर बिरामी कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेम्डेसिभिर बजारमा सहज रूपमा पाइन छोडेको छ । अस्पतालमा... The post रेम्डेसिभिर र अक्सिजन अभाव हुनथाल्याे appeared first on Purbeli News.
कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै तीव्र फैलिँदै जाँदा रोकथाममा अत्यावश्यक मानिने खोप, रेम्डेसिभिर र अक्सिजन चरम अभाव खड्किएको छ ।दैनिक संक्रमणदर २ हजारमाथि पुगे पनि आमनागरिकले खोप पर्याप्त नहुँदा खोप लगाउन पाएका छैनन् । अस्पताल भर्ना भएका र गम्भीर बिरामी कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेम्डेसिभिर बजारमा सहज रूपमा पाइन छोडेको छ ।अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसमेत अभाव छ । चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विज्ञले संक्रमण रोकथाममा अत्यावश्यक मानिएको खोप, रेम्डेसिभिर र अक्सिजन तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई